FAA: Massive 5G rollout new threat to aircraft safety | Aviation
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » zezindiza » I-FAA: Ukukhishwa okukhulu kwe-5G usongo olusha ekuphepheni kwezindiza
I-FAA: Ukukhishwa okukhulu kwe-5G usongo olusha ekuphepheni kwezindiza
Ngokusho kwe-FAA, izindiza nezindiza ezinophephela emhlane ngeke zikwazi ukusebenzisa izinhlelo eziningi zokufika eziqondiswayo nezizenzakalelayo ezikhumulweni zezindiza ezinokuphazanyiswa okungaba okuphezulu kwe-5G njengoba lezi zinhlelo kungenzeka zingathembeki kulezi zimo.
Ochungechungeni lweziqondiso, i-United States I-Federal Aviation Administration (FAA) uxwayise ngokuthi ukukhishwa okukhulu kwezinhlelo ze-mid-band 5G kungase kudale ingozi engathi sína yokuphepha kwendiza ngokuphazamisa imishini yokuhamba futhi kubangele ukuphambukisa kwendiza.
I-US federal civil aviation regulator iphakamise ikakhulukazi ukukhathazeka mayelana ne-5G engase iphazamise ama-altimeters omsakazo - izinto zikagesi ezibucayi zezindiza ezisetshenziswa abashayeli bezindiza ukuze bahlale ngokuphepha ezimeni ezimbi ezingabonakali. Ama-altimeters abonisa ukuthi indiza iphakeme kangakanani ngaphezu komhlaba lapho umshayeli engayiboni.
Ngokusho the FAA, izindiza nezindiza ezinophephela emhlane ngeke zikwazi ukusebenzisa izinhlelo eziningi zokufika eziqondiswayo nezizenzakalelayo ezikhumulweni zezindiza ezinokuphazanyiswa okungaba okuphezulu kwe-5G njengoba lezi zinhlelo kungenzeka zingathembeki kulezi zimo.
Ngaphambilini, izinkampani AT & T futhi Verizon Communications bavumile ukuhlehlisa ukwethulwa kohwebo kwezinsizakalo zabo ezingenantambo ze-C-band 5G kuze kube uJanuwari 5 phakathi nokukhathazeka kwe-FAA. Manje, i-ejensi yase-US ikholelwa ukuthi "isimo esingaphephile" esibangelwa ukusetshenziswa okuzayo kwamanethiwekhi e-5G sidinga isinyathelo esisheshayo ngaphambi kwalolo suku.
“Iziphambeko ze-altimeter yomsakazo” zingaholela “ekulahlekelweni kokuqhubeka nokundiza okuphephile nokuhlala phansi” uma zihlala zingabonwa abashayeli bezindiza noma izinhlelo ezizenzakalelayo zendiza, FAA kusho. Ukufika ngesikhathi sezikhathi eziphansi zokubonakala kungase "kukhawulelwe" ngenxa yokukhathazeka kwe-5G, umkhulumeli we-FAA utshele i-Verge. Omunye wemiyalelo ye-FAA uphinde wathi "le mikhawulo ingavimbela ukuthunyelwa kwezindiza ezindaweni ezithile ezingabonakali kahle futhi ingaholela ekuphambukeni kwendiza."
The FAA iphinde yathi imiyalelo yayo emibili ekhishwe ngoLwesibili, ehlanganisa nemihlahlandlela ebuyekeziwe yezokuphepha, ihloselwe ikakhulukazi ukuqoqa "imininingwane eyengeziwe ukugwema imiphumela engaba khona emishinini yokuphepha kwezindiza."
Le nhlangano isakholelwa ukuthi "ukunwetshwa kwe-5G kanye nezindiza kuzoba khona ngokuphephile." Kusezingxoxweni futhi ne-Federal Communications Commission (FCC), i-White House, nabamele imboni ukuze bathole imininingwane yemikhawulo ezovezwa emasontweni ezayo.
I-FCC ithe ibheke ngabomvu "isiqondiso esibuyekeziwe esivela ku-FAA." I-watchdog yezindiza ithe izaziso ezithile zingakhishwa ezindaweni "lapho idatha evela ku-altimeter yomsakazo ingase ingathembeki" ngenxa yezimpawu ze-5G.
AT & T futhi uVerizon uthe ngasekupheleni kukaNovemba bazothatha izinyathelo zokuphepha ukuze banciphise ukuphazamiseka okungaba khona kwamanethiwekhi abo okungenani izinyanga eziyisithupha. I-FAA iphikise ngoMsombuluko ukuthi akwanele.
Verizon uphendule izolo ngokuthi “abukho ubufakazi” bokuthi amanethiwekhi e-C-band 5G empeleni abeka ubungozi ezindizeni “emazweni amaningi” asevele ewasebenzisa. Inkampani yengeze ngokuthi ihlela "ukufinyelela abantu baseMelika abayizigidi eziyi-100 ngale nethiwekhi engxenyeni yokuqala ka-2022."
AT & T zezindiza I-Federal Aviation Administration I-Federal Communications Commission I-united states
I-IATA: Landela iseluleko se-WHO futhi uhoxise ukuvinjelwa kohambo manje
I-Saudi Arabia manje isinamandla amakhulu e-Hilton Hotels and Resorts
I-Ginseng Ebomvu Yehlisa Ukukhathala Nokucindezeleka
I-Canada ivala indawo yezindiza eRussia
Hlanganyela Ukuze Unqobe: I-Big India Convention eSri...
Indiza yeVancouver eya eBrisbane ku-Air Canada manje
Indiza Yokuhamba Kagesi Yonke manje isiseduze neqiniso
I-Hormel® Yethula Ushizi Osekelwe Esitshalweni Nobhontshisi
Ukuhlonza Ngokunembile I-Alzheimer's and Dementia
Usayizi Wemakethe Yezikebhe Zezindiza, Yabelana, Amathrendi Okukhula, kanye...